Mohamed Salah Oo Twitter Ku Raaligeliyay Gabar Yar Uu Ka Daahiyay Shaqadeeda Iskuulka Ka Dib Markii Gool Soo Daahay Uu U Dhaliyay Masar | Laacib.net
17-11-2018 Saed Balaleti Comments Off on Mohamed Salah Oo Twitter Ku Raaligeliyay Gabar Yar Uu Ka Daahiyay Shaqadeeda Iskuulka Ka Dib Markii Gool Soo Daahay Uu U Dhaliyay Masar
Mohamed Salah ayaa shaki la’aan geesi ka ah wadankiisa Masar, waxaana sababteeda soo bandhigay xalay oo Jimce aheyd.
Weeraryahanka Liverpool ayaa xaday indhaha taageerayaasha isagoo dhaliyay goolka guusha daqiiqadii ugu danbeysay kulankii ay ka badiyeen Tunisia ee Isreebreebka Koobka Qaramada Afrika.
Iyadoo ciyaarta ay 2-2 tahay, Mohamed Salah ayaa kubada ku helay afka hore ee xerada ganaaxa ka hor inta uusan kubada taabasho ah ciyaarin, taasoo u sahashay inuu kubada ka dulqaado goolhayaha oo uu guusha u horseedo Masar.
Goolkaas ayaa ka dhigay in kulankii sideedaad ee isku xigta uu Salah shabaqa u soo taabanayo Masar, sidaasi darteed lama filaan ma ahan inuu geesi u yahay dalkiisa?
Xaqiiqdiina, goolka Salah waxa uu ahaa mid la sugayay iyadoo gabar yar oo taageere ah ay la soo shirtagtay boor ay ku qoran tahay: ” Salah, faldan gooldhali. Waxaan rabaa inaan guriga aado, waxaa ii taalo shaqo guri iskuul”
Sawir laga qaaday gabadha oo boorka kor u heysa ayaa la soo dhigay Twitter iyadoo taageero kale uu sheegay inuu rajo ceynkaas oo kale ah qabay.
Madaama uu Salah goolka xilli danbe dhaliyay, waxa uu gabadha u diray jawaab raaligelin cajiib ah:
“Xaqiiqdii waan isku dayay inaan ku ogolaado inaad guriga aado xilli hore” ayuu yiri. “Waana ka xumahay inaan ku celiyo ilaa iyo daqiiqada ugu danbeysa. Waxaan rajeynayaa in macalinkaaga uu fahmo xaalada.”
Goolka Salah ayaa la micno ah in Masar ay haatan ku dhibco tahay Tunisa iyagoo isla haya hogaanka group-ka waxaana ka harsan hal kulan.